Casharkan, waxaynu ku soo qaadan doonaa magac-u-yaalka gaarka ah ee Ingiriisiga, si kale haddii loo dhigo, magac-u-yaalka gaarka ah ee Ingiriisiga. Magacaabista shakhsi ahaaneed ee Ingiriisiga waxaa badanaa lagu dhigaa fasalka 9aad ama fasalka 10aad ee Ingiriisiga sida ku celcelinta dugsiyada sare.
Waa imisa Magac-u-yaalka Shakhsi ahaaneed ee Ingiriisku?
Baro Ingiriiska Waa lagama maarmaan in si sax ah loo barto luqaddan sida loogu baahan yahay. Halkaa marka ay marayso, mid ka mid ah maadooyinka ugu horreeya ee aan ku kulanno casharrada Ingiriisiga tan iyo dugsiga hoose waa magac-u-yaal shaqsiyeed. Magac-u-yaal Ingiriisi; buugaag badan magacyada shaqsiyeed maraa sida.
Magac-u-yaal shaqsiyeed (oo loogu talagalay ereyada meesha ka gala magacyada gaarka ah)magac shaqsiyeed) la magacaabay. Magac-u-yaalka shakhsi ahaaneed ee Ingiriisiga aad bay u fududahay in la fahmo. Turkiga, waxaan isticmaali karnaa weedh sida "wuu ka baxay magaalada" marka la dhisayo jumlada "Aabbahay wuxuu ka baxay magaalada". Marka la soo koobo, waxaan leenahay mudnaan ah inaan dhahno "sidan buu sameeyay", "halkaas ayuu aaday" iyadoon la carqaladeynin macnaha jumladaha. "Iyada" weedhahan oo kale waa magac-u-yaal shaqsiyeed.
Ingiriisiga, sida Turkiga, waxaa jira lix nooc oo kala duwan, saddex keli ah iyo saddex jamac. magac uyaal shaqsiyeed dhacaya. Si kastaba ha ahaatee, magac-u-yaal shaqsiyeed oo kali ah "o" inta u dhaxaysa; sidoo kale loo qaybiyay saddex. Si kale haddii loo dhigo, saddex magac-u-yaal oo kala duwan ayaa loo adeegsadaa: lab, dheddig iyo alaab iyo xayawaan. Halkaa marka ay marayso, waxaa soo baxaya faraqa u dhexeeya Turkiga iyo Ingiriiska. Halka "isaga" loo isticmaalo Ahmet, Ayşe iyo bisad ee Turkiga, magac-u-yaal shaqsi oo ka duwan ayaa loo adeegsadaa qof kasta ama shay Ingiriisi.
Magac-u-yaal Ingiriisi jira saddex xaaladood oo kala duwan. Magacaabid; Halka ujeedadu tahay magac-u-yaalka shaqada qabanaya, taas oo ah, kiiska magacaabista, waxay astaan ​​u tahay magac-u-yaalka shakhsi ahaaneed ee loo jiheeyo shaqada.
magac-u-yaal; Waxaa loola jeedaa magac-u-yaal shaqsiyeed oo qof walba uu yaqaan. Markaa waa magac-u-yaalka shakhsi ahaaneed ee Ingiriisiga ee aynu naqaanno. Waxayna kala yihiin sidan.
Isagu - Isagu
waa - waa
Anaga – anaga
waxay - waxay
Waxaan ku sharixi karnaa magac-u-yaal shaqsiyeed leh tusaalooyin kala duwan.
Waxaan baranayaa Ingiriis xilligan.
Waxaad tahay qof wanaagsan.
Ma jecla hurdo saacado ah.
Dhibcooyin fiican ayay ku qaadatay dugsiga sare.
Waa qalin. Ha isticmaalin.
Waxaan booqan doonaa ayeeyadayo usbuuca soo socda.
Ma nagu soo biiri doontaa?
Ma rabaan inay dugsiga yimaadaan.
Waxa ay tilmaamaysaa magac-u-yaalka shaqsiga ah ee macnihiisu yahay cidda shaqada loo hago.
aniga - aniga, aniga
Adiga - adiga, adiga
Isaga - isaga, iyada
iyada - isaga, iyada
waa isaga, iyada
annaga – annaga, annaga
Iyaga - iyaga, iyaga
Magac-u-yaal ujeedo Waxaan soo qaadan karnaa dhowr tusaale.
Wuu iga hadlayaa!
Ma rabo inaan kula hadlo!
Macallinkayaga dugsiga hoose ma jecla isaga
Tolga wuu dhunkaday. Falcelin kasta waxay ahayd mid la yaab leh.
Isii aniga! Waa calaamadeeyaha fasalkayaga.
Aabahay been buu noo sheegay. Ma uusan soo laaban dhamaadka bisha.
Kuma danaynayso! Fadlan ka hadal ganacsigaaga!
Sarah ma aysan martiqaadin sababtoo ah waxay la murmeen Melisa.
lahaansho magacyada shaqsiyeed waxaa loo yaqaanaa
Aniga - kayga
kaaga - kaaga
Dareen - kiisa
Hers - isaga
ay - kiisa
Anaga - anaga
kooda – kooda
Arday badan ayay ku adag tahay inay fahmaan magacyada lahaanshaha Mawduuca waxaan ku sharixi karnaa dhawr tusaale!
Ma ogtahay in buuga xusuus qorka uu aniga leeyahay?
Taleefankaygu ma shaqeeyo! Fadlan i sii kaaga!
Guriga geesta ku yaal waa kiisii.
Bacda casaanka ah waa iyada.
Waa inaadan buug ku xukumin jaldigiisa.
Gurigan annagaa iska leh. Waad iman kartaa wakhti kasta oo aad rabto.
Cashada adigaa leh. Hadda waad cuni kartaa
Bisadu iyagaa leh. Waa mid soo jiidasho leh.
Liiska Magacyada Shakhsi ahaaneed ee Ingiriisiga
Aniga: Aniga / Aniga: Aniga / Aniga: Aniga, Aniga
Adiga: Adiga / Adiga: Adiga / Adiga: Adiga, Adiga
Isaga: Isaga / Dareen: Isaga / Isaga: Isaga, Isaga
Iyadu: Isaga / iyada: iyada / iyada: Isaga, isaga
Waa: Isaga / It: Isaga, Isaga / Ma jiro magac-u-yaal “isaga” ee xayawaanka aan noolayn!
Anaga: Anaga / Anaga: Anaga / Anaga: Annaga, Annaga
Iyaga: Iyaga / Iyaga: Iyaga / Iyaga: Iyaga
Tusaalooyinka Weedhyada Magac-u-yaalka Shakhsi ahaaneed ee Ingiriisiga
Fahamka magacyada shaqsiga Waa muhiim inaad ku tababarto magacaaga. Halkaa marka ay marayso, waxaan isku dayi doonaa inaan ku cadeyno tusaalooyin si aad u fahanto mawduuca.
.... waxaan ku fadhiyaa fadhiga.
Sida aad qiyaasi karto, magac-u-yaalka shakhsi ahaaneed ee "I" waa inuu ku yimaaddaa bannaan jumladan. Nooca ugu horreeya ee qofka kali ah ee falka kaaliyaha ah ee noqonaya "am". Sidaa darteed, higgaadda saxda ah ee jumlada; Waxay noqon doontaa "Waxaan ku fadhiyaa fadhiga fadhiga".
…… waxay daawadaan TV Waa inaynaan carqaladayn iyaga.
Magac-u-yaalka shakhsi ahaaneed ee "Iyagu" waa inuu ku yimaad meel bannaan. Magacaabista "adiga" ayaa sidoo kale iman karta. Si kastaba ha ahaatee, waxaynu odhan karnaa magac-u-yaalka shakhsi ahaaneed ee loo baahan yahay halkan waa qof saddexaad oo magac-u-yaal ah oo "Iya" ah, mar haddii weedha "waa inaynaan dhibin" la raacayo.
Ma ka timid Turkiga? Horay kumaan arag.
Meeshu halkan waa "Adiga". qofka labaad magac u yaal Waa inaad timaadaa. Magacaabista "iyaga" ayaa sidoo kale iman karta. Si kastaba ha ahaatee, waxaan fahamsanahay in qofka loola jeedo halkan uu yahay qofka labaad ee kali ah, sida jumlada "Halkan hore kuma arag" la raacayo.
… waxa uu aadayaa guriga. Ma rabtaa inaad wax u sheegto?
"Isaga" waa inuu soo galo meesha banaan. qof saddexaad oo magac u yaal ah taasoo ay tahay in la isticmaalo. Magaca She ama It ayaa sidoo kale iman kara. Si kastaba ha ahaatee, waxaan fahamsanahay in qofka halkan loola jeedaa uu yahay qofka saddexaad ee keligiis ah, mar haddii weedha "Ma waxaad rabtaa inaad wax u sheegto" la raacay.
Bal eeg iyaga! …… waxay isla ciyaarayaan kubbadda cagta.
"Iyaga" waa inay soo galaan meesha bannaan. magaca jamac qofka saddexaad kuwaas oo ay tahay in la isticmaalo. Hadda ka hor, maadaama jumlada hore ay tiraahdo "u fiirso iyaga", waxaa la fahamsan yahay in waxa halkan looga jeedaa ay tahay qof saddexaad oo jamac ah.
…. waa maalin cajiib ah maanta.
"Waxay" waa inay soo galaan meesha bannaan. qof saddexaad oo magac u yaal ah taasoo ay tahay in la isticmaalo. Weedhan, oo macneheedu yahay "maanta waa maalin aad u wanaagsan", qofka saddexaad ee kali ah ayaa loo baahan yahay si sax ah loo isticmaalo.
...... waxay ku hadlayaan Ingiriis. Casharradayada Ingiriisigu waa inoo anfaca.
"Innagu" waa inaan soo galnaa meesha bannaan. Si kale haddii loo dhigo, magaca jamac qofka ugu horreeya waa in aan isticmaalno. Weedha kale, waxaa la fahamsan yahay in waxa loola jeedo weedha "Casharkeena Ingiriisiga waa mid aad u faa'iido badan" ay tahay qofka koowaad ee jamac.
Ganacsiga…. Kevin walaashii?
Sida aad qiyaasi karto, "Iyada" waa inay soo gasho meesha banaan. Si kale haddii loo dhigo, qofka saddexaad ee kali ah magac-u-yaal waa in la isticmaalo. Magaca "isaga" ama "it" sidoo kale waa la isticmaali karaa. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la fahamsan yahay in qofka loola jeedo ereyga "Kevin walaashii" uu yahay dheddig. Sidaa darteed, magac-u-yaalka "Iyadu" waxay noqotaa lama huraan.
…. waxay ku dabaalanayaan barkada. Ma rabo inaan ku casuumo
"Adiga" waa inaad soo gasho meesha banaan. Si kale haddii loo dhigo, qofka labaad ee magac-u-yaalka ah waa in lagu isticmaalo. Magac-u-yaalka "Anaga ama"Iyaga" ayaa sidoo kale iman kara. Si kastaba ha ahaatee, maadaama jumlada labaad ay tiraahdo "Ma rabin inaan ku martiqaado", waxaan dhihi karnaa magaca saxda ah ee shakhsi ahaaneed ee halkan waa "Adiga".
yihiin…. shaleemada? Ma arki karo iyaga.
"Iyaga" waa inay soo galaan meesha bannaan. magaca jamac qofka saddexaad kuwaas oo ay tahay in la isticmaalo. Magacaabista "adiga" ayaa sidoo kale iman karta. Si kastaba ha ahaatee, mar haddii weedha "Ma arki karo iyaga" lagu isticmaalo jumlada labaad, waxaan dhihi karnaa in magaca shakhsi ee saxda ah ee halkan waa "iyaga".
Foomamka Ujeeddooyinka Ingiriisiga ee Layliga
Macallinku mar walba wuu bixiyaa ardayda
Weedhan, qaybta "ardayda" ayaa hoosta laga xariiqay. Maadaama qofka saddexaad ee jamac ah la sheegay, "ardayda" waxaa lagu beddelay "iyagaMagaca "" waa la isticmaali karaa. Si kale haddii loo dhigo, waa jumlad dib loo qori karo sida "macallimku had iyo jeer wuxuu siiyaa shaqada guriga".
Waxaan akhrinayaa buug walaashay yar.
Weedhan, waxaan ku aragnaa in qaybta "walaashay yar" ay hoosta ka xariiqday. Magac-u-yaalka "iyada" waxa loo isticmaali karaa halkii "walaashay yar" maadaama lagu sheegay qofka saddexaad ee kali ah. Si kale haddii loo dhigo, waa jumlad dib loo qori karo sida "Buug ayaan u akhrinayaa iyada".
Wiilashii way fuushan yihiin baaskiiladooda.
Weedhan, qaybta "baaskiilkooda" ayaa hoosta laga xarriiqay. Magac-u-yaalka "iyaga" waxa loo isticmaali karaa halkii "baaskiilkooda" mar haddii la sheegay qofka saddexaad ee jamac ah (aan noolayn). Si kale haddii loo dhigo, “Wiilasha ayaa fuushan iyaga” waa jumlad dib loo qori karo sida.
Aabbahay warqad buu u qorayaa John.
Weedhan, Yooxanaa hoosta laga xarriiqay waxa lagu beddeli karaa qofka saddexaad ee keligii ah. Maadaama Yooxanaa uu yahay magac lab, magac-u-yaalka shakhsi ahaaneed ee "isaga" ayaa loo isticmaali karaa halkii Yooxanaa. Si kale haddii loo dhigo, "Aabbahay warqad buu u qorayaa"
Ma aqaano Jawaabta.
Weedhan, qofka saddexaad ee kali ah (aan noolayn) magac-u-yaalka “it” waxa loo isticmaali karaa halkii laga xarayn lahaa “jawaab”. Si kale haddii loo dhigo, waa jumlad dib loo qori karo sida "Ma garanayo".
Sally waxay u socotaa inay aragto Maria.
Weedhan, magaca Maria ayaa hoosta ka xarriiqay. Mar haddii Maria ay tahay magac dhedig, magac-u-yaalka qofka saddexaad waxa loo isticmaali karaa halkii Maria. Si kale haddii loo dhigo, waxa loo qori karaa sida "Sally way arki doontaa iyada".
Open daaqadda, fadlan!
Weedhan, qofka saddexaad ee kali ah (aan noolayn) magac-u-yaalka waxa loo isticmaali karaa beddelka erayga hoosta laga xarriiqay ee "Daaqadda". Si kale haddii loo dhigo, waa jumlad dib loo qori karo sida "fur, fadlan".
ma sheegi kartaa dadka jidka madaarka, fadlan?
Halkii laga xarriiqi lahaa "dadka" jumladan, "iyagaMagaca "" waa la isticmaali karaa. Sidaa darteed, waa inaan sheegnaa in jumlada loo qori karo sida "ma u sheegi kartaa jidka garoonka diyaaradaha, fadlan".
Buugaagta waxaa loogu talagalay Peter.
Peter waa magac lab. Markaa halkii Butros qof saddexaad oo magac u yaal ah la heli karo. Waa in la ogaadaa in jumlada loo qori karo sida "Feerka isagaa leh".
ma caawin kartaa aniga iyo walaashay, fadlan?
"Aniga iyo walaashay" macneheedu waa aniga iyo walaashay sida qaybta hoosta laga xarriiqay. Halkaa marka ay marayso, waa in la xuso in weedha macnihiisu yahay "ma na caawin kartaa". "annaga" halkii "walaashay iyo aniga" magac uyaal shaqsiyeed yacni, magaca jamac qofka ugu horeeya waa la isticmaali karaa. Waa in la sheegaa in jumlada loo qori doono sida "ma naga caawin kartaa, fadlan".
Magac-u-yaal Magac-yaal Layli-Jimicsi ah
Koobkani ma….. (adiga/adiga)?
Sida socodka jumlada, "adiga" waa inuu yimaado. "Koobkan ma adigaa?" "Maxaa yeelay waa jumlad macne leh"adiga” waa in la isticmaalo.
Kafeegu waa….. (aniga/ aniga)
By socodka weedha"anigaa iska leh“waa in uu yimaado. "Kayga" waa in loo adeegsadaa maadaama ay tahay jumlad macneheedu yahay "kafeegani anigaa leh".
Jaakadaas waa….. (iyada/iyada)
By socodka weedha"iyada“waa in uu yimaado. "Iyada" waa in loo adeegsadaa maadaama ay tahay jumlad macneheedu yahay "jaakadan isagaa leh".
Wuxuu ku nool yahay…. gurigeeda
Sida socodka jumlada, "qof walba" waa inuu yimaado. "Qof walba" waa in loo adeegsadaa maadaama ay tahay jumlad macneheedu yahay "wuxuu ku nool yahay gurigiisa". "guri kasta” taas oo ah “ iyada” waa in loo adeegsadaa sida ay tahay magac ka dambeeya magac-u-yaalka qaabka gurigiisa.
Waxaa laga yaabaa inaad rabto …… (adiga/adiga) taleefanka.
Sida socodka jumlada, "adiga" waa inuu yimaado. Mar haddii "Telefoonkaaga" loo isticmaalo sidaas oo kale, "adiga" waa in la isticmaalo halkii "taaga".
Baabuurka cusub waa …… (iyaga/ iyaga)
By socodka weedha"iyaga“waa in uu yimaado. "Kuwa" waa in loo isticmaalo sida "baabuurkan iyagaa leh". Isticmaalka "Iyaga" waxay ku suurtageli kartaa oo keliya in la dhiso jumlada "Baabuurkoodu waa cusub yahay".
Waxay karisay ….. (anaga/anaga) cuntada
Sida socodka jumlada, "anaga" waa inuu yimaado. Sababtoo ah macneheedu waa "cuntadeena wuu kariyey".
Ha dul istaagin…. (my/kayga) cagta
By socodka weedha"my“waa in uu yimaado. Sababtoo ah, isticmaalka "cagahayga" waa la heli karaa.
Waxay bixisay…. (iyada/iyada) shandad
Sida socodka jumlada, "qof walba" waa inuu yimaado. Waxaa jira isticmaalka sida "shandad kasta". Si kale haddii loo dhigo, weedha waxay leedahay magac ka dambeeya magac-u-yaalka.
waan la kulmay …… (iyaga/iyaga) hooyo
Sida socodka jumlada, "ay" waa inay yimaadaan. Isticmaalka "hooyadood" macquul maaha. Halkan, haddii odhaahda "hooyadood" la hoosta ka xariiqay, "kuwo" waa la isticmaali karaa. Si kastaba ha ahaatee, ma jiro isticmaalka noocaas ah jumladan.
Kani ma…. kafeega?
Marka la eego socodka jumlada, "ay" waa in la soo bandhigaa. Sida tusaalihii hore, magaca waxa raacaya magac-u-yaalka jumlada. magacyada lahaanshaha lama isticmaali karo.
Shaadhka cawl waa… (aniga/aniga)
Marka la eego qulqulka jumlada, "aniga" waa in la keenaa. Sababtoo ah, jumlada, waxaa la rabaa in la xoojiyo cidda alaabta iska leh. Haddii kale, waa in loo isticmaalo sidii "tani waa cumaamadayda cawlan".
Baaskiilkaas cas waa…. (anaga/anaga)
Sida socodka jumlada, "anaga" waa in la keenaa. Weedhan, waxa la rabaa in lagu nuux-nuuxsado cidda alaabtu leedahay. "Baaskiilada cas anigaa leh" sida ay ula jeedaan "dhali” waa in la isticmaalo.
Natiijo ahaan, magac-u-yaalka shaqsiyeed ee Ingiriisida Aad bay u fududahay in la fahmo. magaceed, ujeedo, hanti Waxaynu odhan karnaa magac-u-yaalka shakhsiyeed waxa loo qaybiyaa saddex qaybood oo kala duwan. Dhaqan badan oo la sameeyo, mawduuca si fudud ayaa loo fahmi doonaa.
Dhammaanteen ilaa dugsigii hoose English Waxaan aragnaa casharka. Casharkan oo qaarkeen farxad weyn u ah; Qaar ka mid ah, waxay isku beddeshaa jirdil la doonayo in la joojiyo sida ugu dhakhsaha badan. Si kastaba ha ahaatee, adduunka maanta oo ay tahay in dadku ka gudbaan xuduudaha, Ingiriisiga waa in aan loo arkin maaddo qasab ah sida xisaabta ama sayniska. Sababtoo ah, labadaba nolosha ganacsiga iyo dhinac kasta oo nolol maalmeedka waxaad ka fikiri kartaa. Aqoonta Ingiriisiga Waxay noqotay lama huraan halkii loo baahnaa. Naceybka ay dadku ka qabaan Ingiriisida waa in meesha laga saaraa sababtaan. Qof kasta laga bilaabo arday shan jir ah ilaa 2020 jir shaqaale xafiis ah maalmahan 35-yada English waa in ay isku dayaan in ay bartaan.
Weligaa ma la yaabtay taariikhda Ingiriisiga, luqadda loogu hadlo adduunka, oo ay weheliso Isbaanishka? Soo ifbaxa Ingiriisigu waxa uu dib u bilaabmay qarnigii 5aad ee AD. Socdaalkii ingiriisku ilaa wakhtigan waxa uu ku bilaabmay saddex qabiil oo Jarmal ah oo wakhtigaas qabsaday dhulkii Ingiriiska. Muddadii ay degeen qabaa'ilka Jarmalka, luqadda Celtic waxaa lagaga hadli jiray ciidda Ingiriiska. Si kastaba ha ahaatee, masaafurinta dadka ku hadla afkan oo meelo kala duwan loo musaafuriyay kuwii soo duulay ayaa wax badan ka bedelay.
Intii u dhaxaysay 450 iyo 1100 AD, qabiilooyinkii Jarmalka soo duulay ee aan kor ku soo sheegnay English Waxa la ogaaday in ay ku hadlayeen af ​​ay magacaabeen. Si kastaba ha ahaatee, Ingiriisi hore ma jirin wax ay wadaagaan Ingiriisida maanta marka loo eego ku dhawaaqida ama higgaadda. Marka aynu eegno Ingiriisida maanta, waxa inala gudboon in aynu nidhaahno erayo badan oo la isticmaalay waxa dhiirigeliyay Ingiriiskii hore ee aynu ka hadlayno, inkasta oo ay sannado badan is-bedeshay.
Sannadku markuu ahaa 1100, Ingiriisku wuu horumaray oo wuxuu galay xilligii Ingiriisiga dhexe, si la mid ah qarniyadii dhexe. Muddadan; Waxay socotay ilaa horraantii 1500aadkii. Sannadkii 1066-kii, qabsashadii iyo qabsashadii Ingiriiska ee uu qabsaday William the Conqueror, oo loo yaqaanay Duke of Normandy, mudnaanta qaar ayaa bilaabay in ay bulshada ka dhex arkaan xagga luqadda.
Qaybta hoose ee dadweynaha, sida nidaamka qallafsanaanta ee Hindiya English Intuu hadlayay, dadka dabaqadda sare waxay ku hadli jireen Faransiis. Xaaladdan oo kale, qarnigii 14aad, waxaa soo baxay luqad la yiraahdo Ingiriisi dhexe, taas oo ay ugu wacan tahay in lagu daro ereyada asal ahaan Faransiiska ee Ingiriisiga. Waa in aan sheegnaa in afkani uusan hadda lahayn isticmaal iyo xitaa in fahamkiisu xaddidan yahay.
Horumarinta Ingiriisiga Iyadoo la tixgelinayo tan, waxaan dhihi karnaa in Ingiriisiga casriga ah uu yimaado ugu dambeeya. Waxaynu odhan karnaa muddadani waxay daboolaysaa sannadihii 1500 ilaa 1800. Horumarkii siyaasadeed iyo dhaqaale ee qarnigii 16-aad ka dhashay, dadka Ingiriiska waxay bilaabeen inay la xiriiraan bulshooyinka kale. Iyadoo Renaissance, erayo iyo sarbeebyo badan oo cusub ayaa soo galay luqadda.
Sidoo kale, curinta madbacaddu waxay ahayd horumar soo dedejisay soo bixista af leh meeqaam daabacan. Geedi socodkii xigay, dhulka waxaa loo diyaariyay soo bixitaanka ereyo cusub oo ay ugu wacan tahay Kacaankii Warshadaha iyo tignoolajiyada. Intaa waxaa dheer, xaqiiqda ah in Boqortooyada Ingiriisku ay daboosho rubuc ka mid ah dhulka iyada oo la marayo wakhtigu waxay sidoo kale ahayd arrin saameynaysa horumarka Ingiriisiga.
Gabagabadii, waxaan odhan karnaa ingiriisku waxa uu soo maray marxalado badan oo qiimo leh sanadahaas oo uu soo gaadhay maanta.
Maxaynu u baranaynaa Ingiriisiga?
Qof kasta, iyada oo aan laga reebo, tan iyo horraantii 1990-meeyadii English Waxa uu sheegay in waxbarashadu ay lagama maarmaan tahay. Si kastaba ha ahaatee, maskaxda dad badan, oo leh dadaal badan iyo af-ingiriis shaqsiyeedka Waxaa jira calaamado su'aal ah oo ku saabsan sida ay lagama maarmaanka u tahay waxbarashadu. dugsiyada Waxbarashada Ingiriisiga Waxay hadda gaartay heerkii barbaarinta! Iyo sidoo kale, English Suurtagal ma aha in aad meel kasta ka gaadho nolosha ganacsiga adiga oo aan ogayn! Si kale haddii loo dhigo, waxaan si fudud u dhihi karnaa in Ingiriisigu la kulmo dhinac kasta oo ganacsi iyo nolol maalmeedka.
In kasta oo tirada dadka Ingiriisiga ku hadla loo yaqaan 400 milyan, ku dhawaad ​​1.5 bilyan oo qof adduunka oo dhan English hadlaya. Ingiriisi waa luqadda ugu saxsan gees kasta oo ka mid ah ganacsiga, waxbarashada, farshaxanka, dhaqanka iyo madadaalada.
English Haddii aad ogtahay, waxaad la socon kartaa isbeddelka caalamiga ah. Si kale haddii loo dhigo, waxaad heli doontaa fursad aad ku barato horumarka ka socda gees kasta oo adduunka ah.
English Haddii aad ogtahay, ma sugi doontid inta agabka ku qoran luqaddan lagu turjumayo turkiga si aad u akhrido. Waxaad u baahan doontaa Ingiriisi si aad u noqoto kan ugu fiican ma aha oo kaliya meesha aad ku fideyso dibadda, laakiin sidoo kale meesha aad joogto.
English Tani waxay kordhin doontaa kalsoonidaada. Waxaad dareemi doontaa fiicnaan markaad ku guulaysato waxaad qabato. Intaa waxaa dheer, markaad barato oo aad ku hadasho Ingiriisiga, waxaad ka heli doontaa ixtiraam agagaarkaaga.
Haddii aad Ingiriisiga ku barato heer ka sarreeya xagga akhriska, dhegeysiga, qoraalka iyo shuruudaha hadalka, ma waayi doontid wax shaqo ama fursado waxbarasho oo kugu soo wajahan.
Luuqadda waxbarashada ee jaamacadaha ugu wanaagsan Turkiga English Waxaan dhihi karnaa waa. Dugsiyada sida Boğazici University, Middle East Technical University iyo Bilkent University, dhammaan koorsooyinka waxaa lagu dhigaa XNUMX% Ingiriisi. Haddi aad taqaano Ingiriisi, waxa aad ku gudbi kartaa imtixaanada u diyaar garowga dugsiyadan. Waxa kale oo aad ku guulaysan kartaa koorasyadaada waaxdaada.
Ugu dambeyntii, Magac-u-yaal Ingiriisi Waa in aan nidhaahnaa in waxbarashadu aad muhiim ugu tahay horumarka maskaxda. Markaad baranayso luqad kasta oo ajnabi ah, maskaxdaadu waxay ku shaqeysaa farsamo ka duwan habka fikirka ee loo isticmaalo. Haddii aad si fiican u hadasho oo aad u qorto qaab-dhismeedka jumladaha kala duwan, waxa aad hagaajin doontaa maskaxdaada iyo xusuustaada labadaba.
# Waa imisa Magac-u-yaalka Shakhsi ahaaneed ee Ingiriisku?
# Ujeeddo Ujeeddo
# Magac-u-yaalka lahaanshaha
# Liiska Magacyada Shakhsi ahaaneed ee Ingiriisiga
# Tusaalooyinka Weedhyada Magac-u-yaalka Shakhsi ahaaneed ee Ingiriisiga
# Foomamka Ujeeddooyinka Ingiriisiga ee Layliga
# Magac-u-yaal Magac-yaal Layli-Jimicsi ah
# Taariikhda Ingiriisiga
# Maxaynu u baranaynaa Ingiriisiga?
Tags: Fasalka 10aad ee af-ingiriisi magac-u-yaal shaqsiyeed, Fasalka 10aad ee af-ingiriisi magac-u-yaal shaqsiyeed, Fasalka 9aad ee af-ingiriisi magac-u-yaal shaqsiyeed, Fasalka 9aad ee af-ingiriisi magac-u-yaal shaqsiyeed, af-ingiriis shaqsiyeedka, af-ingiriisi shakhsi-u-sheega fasalka 9